दूध पिइसके पछि बिर्सिएर पनि नगर्नुहोस् यी काम, नत्र भोग्नुपर्नेछ यसको परिणाम – Wow Sansar
आजकल हरेक कोई आफ्नो स्वास्थ्यलाई लिएर दुखी हुन्छन् । तर हामी सबै यति व्यस्त हुन्छौँ कि आफ्नो ठिक तरिकाले ध्यान पनि राख्ने गर्दर्नौ ।
त्यसैले कतिपय मानसि त्यत्तिकै बिमार हुने गर्दछन् । यदि हाम्रो शरीर स्वस्थ रहने भने हामी कसरी हाम्रो काम पुरा गर्न सक्दछौँ त ? हामीले हाम्रो स्वास्थ्यको खास ध्यान राख्नुपर्ने हुन्छ ।
दुध पिउनुभन्दा अगाडि यी चिज खानुहुँदैन अन्यथा यसले लाभको सट्टा हानि गर्न सक्छ। त्यसोभए आउनुहोस् जानौँ हामीले कुन चीजहरू जुन दुधको अघि वा पछि खानुहुन्न ।
माछा खाए पछि दुध पिउनु ठीक हुँदैन, किनभने माछामा यस्तै धेरै पौष्टिक तत्त्वहरू छन्, जसले तपाईंको स्वास्थ्यलाई ठूलो लाभ दिन्छ। कृपया भन्नुहोस् कि, यदि तपाईं माछा खाएपछि दूध पिउनुहुन्छ, भने यसले दुधबाट फाइदा भन्दा पनि नोक्सान गर्न सक्दछ। किनभने दुध पछि माछा खाँदा तपाईलाई लाइडरमा भन्ने रोग हुन सक्छ। यो रोगको कारणले गर्दा, हाम्रो शरीरमा सेतो दागहरू हुन सक्छन्।
Prevदिवंगत पत्निलाई सम्झिएर रुन्छन् मदनकृष्ण, भन्छन् ‘श्रीमतीको जीवन लम्ब्याउन ६ बर्ष ब्रत बसेँ
Nextप्रेमीसँग मोवाइलमा कुरा गर्न नदिएको भन्दै किशोरीले लिइन् बाबुको ज्यान र कम्बलले बेरेर घरपछाडि राखिदिइन्! यसरी खुल्यो रहस्य
१० वर्षको केटो पिता र १३ वर्षकी केटी आमा बन्ने भएपछि…